[Ankapobeny ] 12 Jolay, 2008 07:17
Nandeha be ny resaka oe hanao bal populaire etsy Andavamamba ny frantsay @ fankalazana ny 14 jiolay. Fetiny moa io tsy atao mahagaga izany izay ankalazany azy any tsy mampaninona fa ny faneligelenana ny hafa kosa no mila tandremana. Heno mantsy fa oe ho tapahana ny lalana manoloana ny Alliance française io @ alatsinainy ka asa izay mba ho fihetsika ataon'ny kaominina @ izany.
Ho raisina @ fomba manetriketrika eny Iavoloha kosaireo 11 mianadahy nahavita ny fianarany tany amerika. Ny filoha ny repoblika moa no nanome vatsim-pianarana ho azy ireo ka rariny raha mba manome voninahitra kely azy ireto mpianatra tao aorinan'ny nahavitany ny fianarany. Misy @ ireto ankizy ireto moa ny mbola hanohy ny fianarany any @ benkitana ihany hamita ny Masters sy ny Phd. Eo ihany koa anefa ireo nisafidy ny hijanona eto an-tanindrazana @ izay.
Fisolokiana kosa no tena marina t@ ilay resaka fivohahan'ny laza adina bepc tany mahajanga satria dia laza adina t@ examen blanc no natao photocopie ary naparitaka eran'ny tanana mba hanosoram-potaka ireo mpikarakara ny fanadinana. Efa mandeha moa ny famotorana @ izao fotoana izao. Ny irarina dia ny hizoran'ny fanadinana ara-panjakana manaraka ampilaminana sy ao anatin'ny fahamarinana.
Mangigina kosa ny tontolo ny blaogy ankehitriny satria tena efa ao anatin'ny fialan-tsasatra ny ankamaron'ny fianakaviana. Ny hilazako an'izany dia ny olona mamela hafatra sy ireo lahatsoratra vaovao miseho. Mirary fialan-tsasatra mamy ho antsika rehetra. Tandremo sao dia mahazo loko laotra ary. LOL!!!